अरु देशले जहाज चार्टर गरेर आफ्ना नागरिक लगे, नेपालका नागरिक सीमामै अलपत्र..तपाई के भन्नु हुन्छ? – Kantipur Press
अरु देशले जहाज चार्टर गरेर आफ्ना नागरिक लगे, नेपालका नागरिक सीमामै अलपत्र..तपाई के भन्नु हुन्छ?
काठमाडौ – विश्वव्यापी महा’मारीको रुपमा फैलिएको नाबेल को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) बाट विश्व आतं’कित बनिरहेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न विदेशी दूतावासहरुले आफ्ना नागरिकहरुदाई राज्य भएको अनुभव दिलाएको छ ।उसले कोरो’नाको संक्र’मणबाट रोक्न लागि नागरिकहरुलाई सकुशल घर पुर्याएको हो । विभिन्न देशले नेपाललगायतका
देशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता लगिरहेको छ ।नेपालबाट हिजो अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्ना नागरीक नेपाल एयरलाइन्सबाट लगेको छ । अमेरिकाले कतार एयरबाट ३०२ जना लगेको छ भने युरोपियन युनियन आवद्ध मुलुकहरुले कतार एयरबाटै आफ्ना नागरिकलाई लगिसकेको छ ।
अहिले नेदरल्याण्डले मलेसियन एयरलाइन्सबाट आफ्ना नागरिक लग्दैछ ।काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले नेपालमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई दुई वटा जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लगिसकेको छ । शुक्रबार काठमाडौंबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजले एक सय ९० जनालाई स्वदेश फर्काएको हो ।त्यस्तै फ्रान्सले पनि जहाज चार्टर गरेर आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेको छ । त्यस्तै चीनले पनि नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक फिर्ता लाने तयारी गरिरहेको छ ।तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले राज्य भएको अनुभूति पाएका छैनन् । सरकारले नेपाल फिर्ता हुन चाहनेहरुलाई पनि ‘जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुस्’ भनिसकेको छ ।
सरकारले भारतीय सीमा धार्चुलाबाट नेपाल प्रवेश गर्न लागेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाल छिर्न दिएको छैन् । सरकारका मन्त्रीले उनीहरुलाई भारतमा खानेबस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइरहेका छन् । रोजगारीका लागि भारत गएकाहरु भारत सरकारले लकडाउन गरेपछि बिचल्लीमा परेका छन् ।उनीहरुले खुला आकाशमुनी भोकभोकै रात काटिरेहका छन् । धार्चुलामा अहिले करिब ८ सय नेपाली अलपत्र परेका छन् । सरकारले नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि ३ जना नेपाली महाकाली नदीमा जोखिम मोलेर छिरेका छन् ।
भारतीय सीमाबाट रोइकराई गरिरहेका नेपालीको बारेमा सरकारले कठोरता प्रर्दशन गरिरहेको छ ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुले सरकारले लाचारीपन देखाएको आ’रोप लगाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन कुनै पहल नगरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आ’लोचना भइरहेको छ ।
कोरोना महामारी – कोरियामा सामाजिक दुरी कायम अभियान अप्रिल १९ सम्म
कोरोना महामारी अपडेट – विश्वभर ६४ हजार ७३२ को मृ’त्यु, १२ लाखभन्दा बढी संक्रमित